Farmaajo oo La Sheegay Inuu ka jaray Lacag & Gunnadii Laba madaxweyne oo ka horeeyay • Oodweynenews.com Oodweyne News
Xog ay heshay Warbaahintu ayaa xaqiijineysa in qeyb ka mid ah laga jartay lacago gunno ah oo ay qaadan jireen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo ay bixin jirtay dowladda dhexe.
Lacagtan ayaa aheyd mid labada madaxweyne ama madaxweyne kasta oo xilka ka dega uu dastuurka u ogolanayo, balse waxaa lacagtaas hadda qeyb kamid ah ka jaray Villa Somalia, sida ay xaqiijiyeen xubno ku dhow.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wareysi uu bixiyay maalmo ka hor, waxa uu ku sheegay in laga jaray qeyb kamid ah lacago ay xaq u lahaayeen islamarkaana ay qaadan jireen sanado ka hor.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in lacagta gunnooyinka ah laga jatay ciidankii la socday isaga iyo madaxweyne Sheekh Shariif.
Wali Xukumada farmaajo kama aysan hadlin eedeymaha loo soo jeediyay oo ah kuwa culus maadaama uu cadeeyay mid kamid ah madaxdii hore.